MUUQAAL: Madaxwayne Farmaajo oo BOOSAASO Kala Kulmay soo dhowayn Balaadhan iyo Khudbad uu ka Jeediyey | Kalshaale
Jan 11, 2018 - 12 Aragtiyood
Boosaaso (Kalshaale) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo booqasho ku maraya Qaybo kamid ah dalka , ayaa maanta soo gaadhay xarunta gamacsiga ee Bosaso oo si weyn loogu soo dhaweey wefdiga Madaxweynaha Soomaaliya.
SOO DHAWAYNTA FARMAAJO WAXAY KUTUSAYSAA IN SHACABKU HOGAAMIYE & DAWLAD UBAAHAN YIHIIN
Farmaajo horta ma ka hadlay Tukaraq?😀💪
Madaxweynahu wuxuu booqasho ku joogaa maamulka Puntland, Puntland waa Bari iyo Nugaal.
Meel ka baxsan tuulooyinka iyo degmooyinka Bari iyo Nugaal qorshaha uguma jirto inuu tago ama booqdo
“” Marka maxaad ugu caraadin inuu tago meelkale oo ka baxsan Bari iyo Nugaal.
Waa anigoo dhaho Xar XUDUR TAG.
…woow…..maxaxweyne Farmaajo maanta wuxuu qiray wixii aan halkan marar badan uga faallooday. In ilaahay mahadi haka gaartee, ay Puntland hore wanaagsan samaysay.Horumarkaasna, uu inta badan ku yimid hal abuurka madaxweeyne Gaas ee “Isku Tashi”.
Waxaa iyana wax La ammaanaa, in horumarkaasi uusan imminka ku koobnayn magaalooyinka waa weyn oo keliya ee uu ku baahsanyahay degmooyinka ee tuulooyinka laamiga ka fog.
Wax badan baa iyadoo Soomaali jacayl iyo niyad wanaag naga ah, baanu damacnay inaanu horumarkaas la qaybsano Soomaalida kale ee walaalaheen ah si ay Puntland uga daydaan wanaagaas iyo horumarkaas. Laakiin waxaad moodaysay, in Soomaalidu aanay dhab ahaan u fahmin horumarkaas, hadda waa ilaahay mahaddii in madaxweeyne Farmaajo iyo wafdiga la socdaa ay si wacan ula dhaceen ugana markhaati kaceen horumarkaas, ayna ballanqaadeen inay fakraddaas “Isku Tashi” ee uu curiyey dhaqanna geliyey dhaqaale yahan professor Abdiweli Gaas ay qaramayn doonaan iyagoo hal ku dhig uga dhigaya dib u yagleelidda dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan.
Dhulka iyo horumarka ka socda madaxwweyne Farmaajo ma wada arki karo. Bariga fog iyo meelo kale oo badan wakhti uu ku soo arko ma hayo. Laakiin in tusaale ugu filan wuu arkay.
Waxaa kale oo madaxweyne Farmaajo la yaabay, Lana fajacay horumarka ay Puntland ka gaartay xagga nabadgelyada iyo tayaynta ciidamada. Wuxuu arkay dhulka intaa le’eg oo ciidamo shisheye aanay nabadgelyada ka caawiynayn ee waxa nabaddaas hantay ay yihiin ciidamo Soomaliyeed oo Puntland leedahay.
Farmaajo wuxuu gaari ku maray dhul masaafo ahaan aad u ballaran oo ammaankiisa ay Sugeen ciidamada Puntland oo keliya. Taasoo keentay in madaxweyne Farmaajo uu meel lug ku maro. Wuxuu maanta Farmaajo maanta madaxweyne mug leh. Haysta dad iyo dal xora oo nabada. Wuxuu ogaaday in Soomaaliya aanay wada dhiman, ee weli barkeed noolyahay. Wuxuu ogaaday inay jirto meel Soomaaliya nuurka looga siraadi karo ayna ka soo noolaan karto.
Talo madaxweyne Farmaajo maanta laga bilaabo waa inuu ogaadaa inuu yahay madaxweeyne taageero shacab oo waddankoo dhan ah haysta. Waa inuu ku dhiiradaa arrimo aanay madaxdii isaga ka horraysay ku dhiiran karin, maxaa yeelay wuxuu haystaa fursad iyo taageero shacab oo ballaaran. Waa inuu madaxweynuhu si fiican uga faaiidaystaa furdadda hortaal. Shacabka Puntland Farmaajo taageero aan horay loo arag bay u muujiyeen, taasoo madaxweynaha kalsoonidiisa kor usii qaadaysa.
Tariilh lama ilaawan ah ayaka dhacday puntland galabta Bossaso shacabkii sobaxay wala yabay sawaxan marban mooday dhul gariir gah gah gah
Calacal iyo calool xumo waxan aheyn kuguma heynee ilamada casho puntland dhulkeeda hadal horay ayaa loogu qaadi wayey farxad ayanku jirnaa aniga iyo farmaajo e korkaas naga daawada (Isha)gah gah gah gah gah gah gah
Dhamaan waan idin salamy.Madaxweynaha qaranka wlcm waligiis lomasoo dhaweyn sidaan masuul boqortayiii ayaa gacanta kugu heysaa marba magaalo sodaaawo magalooyin iyo laamiyo dhisan somalidii aan waxba heyn iyo Puntland maxanakal heysta kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk KUwaaa tusbaxa kooska heysta o habaar wada kuwaa ceytamaya kuwa isla ilmeynaya war dadka dhibka heysta yanoo sheega kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ilaahoow aysana cawryin kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Gobannimada iyo waddaniyaddu waa u dhalasho ma ahan wax la soo amaahdo ama afka laga sheegto, Ree Dhul udug waxaan qirayaa inaanay labadaaba cidu ku gaarin.
Taariikh lama illaawaan ah bay ree Puntland maanta kaydka sooyaalka dhigteen, waxaa aad uga xumaaday taariikhdaa dalalkii cadawga noo ahaa, qarandiidkii, nabad diidkii, Soomaalinnimo diidkii iyo dhammaan xaasidiintoo oo dhan.
Guuul iyo Gobannimo Puntlanad.
Madaxwynaha hadad lhudbadihiisa dhageysan o micno kugu fadhiyin maxad wax qabadkisa kaa galay warniyahoow ileen faaruuq ayaad tahay ?gah gah gah gah gah gah
Waxaan filayaa inaad golahan ku cusub tahay oo aad dadka kala garanayn
Waxaad heli kartay sida Axmed Somali sameeyay inaad ila i cidhbiso adiga oo ii gefin. Laakiin waa xaal Soomaali haddii uu qabiil indha tiro in aflagaaddu sawaariikh ahaan iska tuuro.
Aniga ku caayi maayo laakiin waxaad miss garaysay fursad aynu wax isku waydaaran lahayn.
Si kastaba Farmaajo ma ahan nin af tahan ah oo hadal cusub curin kara. Marka haddii mar un la dhaqaysto khudbadaha kale waa redundancy ama ku celicelin.
Marka Jaalle sidaa ula soco
Ali zubeer asc Mudane sare
Halla yaabin reer pudland beryahaan waa wadaniyiin madaama ay sifiican usoo dhaweyaan madaxweynihii laakiin soo dhaweyn waxba tari meyso hadaan lala sheqeyneyn oo aan maqli doono wax kale
Suldaan madaxweynuhu dhowr khudbadood ayuu jeediyay tii ugu macquulsaneyd wuxuu ka jeediyay jaamacadda garoowe kutaalo
Isku soo duub hadalka adigaa horay u dhameeyay Mr farmaajo dowladdis howlihii ugu cuslaa wey u dhiman tahay
* sameynta ciidan qaran oo ka madax banaan qabiilka iyo siyaasad si ay u buuxiyaan booska amisom
* mideynta canshuurta dalka
* daltuurka oo lasoxo ama meesha laga saaro
* dhisidda maxkaddi qaran oo lagu kalsonaan karo
Intaas oo howl ah ayaa hortaalo
Waa runtaa oo Farmaajo shaqo culus baa u taalla isagana khudbado cantari ayuu sannad ku dhammeeyay.
Sannadkan cusub waxaan rajayno waa isagoo wax un qabta
Reer Pudhlayn kacaannimadooda waa mid qabiili ah sidaan u arkay in kasta oo ay jiraan dad Somalinnimada ka dhab ah sida odaygii ooyay iyo dumar badan laakiin Suldaan Ali Zubeer isuma qabad siin karaan khiyaanada iyo hagardaamooyinkiisa uu ku hayo Dowladda Soomaaliya iyo shacabkan uu soo tubay waddooyinka ee dowladnimada u ooman.